Ngaba usetyenziso lwam lwe-Android luthatha indawo enkulu | I-Androidsis
Kutheni le nto iiapps ze-Android zithatha indawo enkulu kangaka?
Indawo yokugcina yefowuni yethu ye-Android Yenye yeenkalo ezisixhalabisayo. Ukuba unefowuni ephezulu, ayisoloko iyinto ekukhathazayo. Kodwa, kubasebenzisi abanesixhobo esine-16 okanye i-32 GB yokugcina, imeko iyatshintsha ngokubonakalayo. Kuba kuqhelekile ukuba uphele unendawo encinci efumanekayo kwifowuni yakho.
Kwakhona, xa ujonga ukusetyenziswa kokugcina okugcinwe kwi-Android, uyamangaliswa kukubona ubunzima obunezicelo ezininzi. Zihlala zingunobangela wokungabikho kwendawo. Kutheni lento isenzeka? Kutheni iiapps zam zinzima kangaka?
1 Ukugcinwa kwe-Android
2 Sifanele senze ntoni
Xa sibona indawo ekuhlalwa kuyo kwifowuni yethu ye-Android, siyabona ukuba ihlala iyizicelo ezifuna esona sithuba. Ukuyibona ngokweenkcukacha, Ungaya kwicandelo lezicelo kuseto lwefowuni. Apho uyakufumana uluhlu oluneenkcukacha lwezicelo kwifowuni, kunye nobunzima bento nganye nganye.
Xa ujonga oku, kuxa sothuka. Njengoko kukho iiapps ezinje ngegoogle chrome, ezithatha indawo eninzi. Ngamanye amaxesha, isikhangeli sinokulinganisa ngaphezulu kwe-1 GB, nepesenti ebalulekileyo yokugcina kwakho. Le yinto edidayo kakhulu kwinxalenye enkulu yabasebenzisi be-Android. Kwenzeka njani ukuba inzima kangaka?
Unobangela ophambili wale ndawo kukusetyenziswa kwayo esinayo kwi-Android. Yiyo le nto ibangela ukuba kwiimeko ezininzi, ubunzima bazo benyuka kwaye baphela ngokuhlala kwinxalenye enkulu yendawo yethu yokugcina emnxebeni. Ezi ziifayile zethutyana ezigcinwa zizicelo, kwaye iinjongo zazo kukuphucula isantya sezicelo. Ke, zilayishwe ngaphambili kwaye ukusetyenziswa kwezixhobo kunye nedatha kusezantsi.
Nangona iluncedo ngandlela ithile, njengoko sisebenzisa iapp, i-cache izonyuka. Ke ngoko, isicelo siya kubanesisindo ngakumbi nangakumbi. Oluphi utsalo olubalulekileyo kwindawo yethu yokugcina. Ke, kwezi ntlobo zeemeko, sinyanzelekile ukuba sithathe inyathelo.
Sifanele senze ntoni
Xa kuziwa ekukhululeni indawo kwi-Android sinezinto ezininzi onokukhetha kuzo, ezi Sele sikubonisile ngamanye amaxesha. Nangona kule meko ithile, apho i-cache yesicelo yiyo ebangela ukuba siphelelwe yindawo yokugcina, kungcono ukucoca i-cache.
Ngale ndlela, sinokukhetha okuninzi kwifowuni yethu ye-Android. Kwelinye icala, sinokubakho Cacisa i-cache yazo zonke ii -apps esinayo emnxebeni ngokuthe ngqo, into enokusivumela ukuba sifumane indawo emnxebeni. Nangona sisigqibo esithe kratya ngakumbi. Kuba kukho izicelo ezinokuthi zivelise i-cache okanye zithathe indawo.
Ke ngoko, esinokukwenza kucacile i-cache ye ezo zicelo zithatha indawo eninzi kakhulu, njengoko sele sibonisile. Into ekufuneka siyenzile ngezicelo ezinje ngeGoogle Chrome, ezigqibela ngokuthatha indawo enkulu kwi-Android. Ke, sizifumana sikwizo zinto zivelisa le ngxaki.
Sula i-cache yesicelo kwi-Android yinto esingafanele siyithathe kancinci. Kukho abasebenzisi abayibona njengendlela yokuvelisa ukusebenza okungcono, kodwa kukho amathandabuzo amaninzi malunga nayo Uncedo lokwenza le nto rhoqo. Nangona iyinto ethi isincede amaxesha ngamaxesha, kufuneka sikhethe ukuba kukwenza kangaphi oku. Ukusukela ngale ndlela, sikhulula indawo xa kufanelekile.
Nangona, njengoko sisebenzisa iapp kwakhona, uya kuphinda utyebe, ukunciphisa indawo yokugcina kwi-Android kwakhona. Le yinto eqhelekileyo, eveliswa kukusetyenziswa kwesicelo ngokwaso. Ke asinakwenza nto malunga nayo. Ngamanye amaxesha, ukuba unayo ifowuni ehambelanayo, ungaya kwiinguqulelo ze-Go okanye zeLite zeapps, ezithatha indawo encinci kwaye zisebenzise izixhobo ezimbalwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Kutheni le nto iiapps ze-Android zithatha indawo enkulu kangaka?
Uyenza njani i-Instagram yakho ephezulu kwi-Android
Le yiHuawei Nova 4 enekhamera efakwe kwiscreen